downloads 20 110
Ikenyeneke mbiet Boeing 747-200 agba nke AIR FRANCE (Version 2004)-eji nku echiche na a nnọọ ezi uche kokpiiti!
Ẹkenam ke 1972, ndị 747-200 nwere elu nzube turbojets na bughi uka bụ buru ibu karịa 747-100. Ya ọdọ ekwe ka e ji ebu ihe nke manu karịa, si otú ịba ụba ya nso. Ọ bụ ihe oké ya asatọ oche windo (ụfọdụ ụlọ ọrụ zụtara mgbanwe SOUTH - Streched Upper oche: akp elu oche - na-enye onye ahụ nke a B747-300). Ụdị na 200 Series Classic, wuru ná mmalite 1990s, nwere ike ịga njem banyere 12 700 km zuru ezu ibu.
Onye edemede: Repaint de Project Opensky